Cusboonaysiinta Nidaamiyaha Bilaashka ah ee Mozilla Firefox | TeraNews.net
Cusboonaysiiyay Cusboonaysiinta Qalabka Bilaashka ah ee Mozilla Firefox
qoraaga artem La daabacay 19.12.2017
Rabitaanku kama hoos baxo tiirarka caanka ah ee Mozilla Firefox, oo ka mid ah shanta dalab ee ugu wanaagsan qiimeynta barnaamijyada caanka ah ee internetka.
Dhibaatooyinka waxay ku bilaabeen cusboonaysiin kombiyuutar oo dhacay 10 maalmood kahor. Nooca hagaagsan ee biraawsarka ayaa la socodsiiyay isticmaaleyaasha wixii ku saabsan xasilloonida la wanaajiyey iyo horumarinnada yar ee ku yimid is-dhexgalka. Si kastaba ha noqotee, isla maalintaas, barnaamij-sameeyeyaasha ka shaqeeya maareynta horumarinta websaydhada ayaa dhibaato ka helay bogagga qafisyada waxayna ku abuureen mowduucyo laxiriira qaybo ka mid ah golayaasha gaarka ah. By habka, dhibaatada keydinta xogta qaab foomka Computer-ka ee WordPress wali lama xallin.
Arrinta labaad waxay saameysay asturnaanta isticmaale. Bog furaha, oo aan la aqoon milkiilaha, wuxuu rakibay add-on loo yaqaan 'Glass Glass'. Daraasad kadib, waxaan ku guuleystey inaan ogaado in tani aysan aheyn Trojan iyo aysan ahayn spam, laakiin ay xayeysiin u tahay taxanaha "Mr. Robot".
Marka loo eego soosaarayaasha biraawsarka biraawsarka loo yaqaan "Mozilla Firefox browser", adeegsadayaasha dhibaatada kahelay xayeysiimaha laftooda ayaa oggolaaday rakibidda. Xaraashka, marka la rakibayo barnaamijka, waxqabadka Daraasaadka Waxbarshada ee 'Mozilla Shield Studies' waa mid karti u leh, kaas oo u oggolaanaya rakibidda cutubyo dheeri ah iyada oo aan oggolaansho laga haysan milkiilaha.
Dheeraad ah - xitaa xiiso badan. Taxanaha "Mr. Robot" wuxuu ka hadlayaa dhibaatooyinka amniga, halka dabeecadda ugu weyn, isagoo ah maamule ka shaqeeya hal shirkad inta lagu jiro maalinta, ay jebiso macaamiisha kale ee dadka habeenkii, oo u rogaya jabsiga adag. Khabiirada amniga ayaa ku talinaya taxanaha si loo daawado isticmaaleyaasha daneeya amniga xogtooda. Iyo Mozilla Firefox, halkan waxay u shaqeysaa sidii af-ka-hadalka oo ka diga dadka badankood hab yaab leh.
Nokia C20 Plus oo loogu talagalay 90 Euro - shirkaddu waxay ku soo laabatay aasaaska
Sharp Aquos R6 taleefan kamarad leh Leica optics
Poan Titan - Taleefanka gacanta ee casriga ah ee casriga ah ee wata “BlackBerry keyboard”
AirTag Apple - tracker yar oo wax